स्टक चंचल रेड कर्ली हेयर बी कप एम्मा फिन १148 सीएम टीपीई वयस्क सेक्स डॉल
26 सेव%$ 999.99$ 1,336.00
1. साइज: 157cm/B कप (TPE ठोस स्तन)
2. विग: चित्रमा देखाइएको रूपमा
3. आँखाको बल रंग: खैरो
4. गिफ्ट आईबलहरू: नीलो
5. छालाको टोन: हल्का खैरो
6. Areola रंग: हल्का खैरो
7. तल्लो शरीरको रंग: खैरो
8. योनि: बिल्ट-इन
9. प्यूबिक हेयर: कुनै पनि छैन
10. स्थायी: हो
11. काँधको जोर्नी: कंधे
12. कंकाल: डबल-जोइन्ट कंकाल
13. नङ रंग: नग्न फ्रान्सेली मैनीक्योर
√ रसद: UPS वा USPS।
√ प्याकेजहरू पठाइएपछि ट्र्याक गर्न सकिन्छ।
√ स्टकमा सेक्स पुतली डेलिभरी समय: सबैभन्दा छिटो छ2गर्न6दिनहरू। (अमेरिकी आदेश मात्र)। मुख्यतया अमेरिकाबाट जहाजहरू।
√ तपाईंले भुक्तान गर्न निम्न भुक्तानी विधिहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, सबै Urdolls भुक्तानीहरू हुन् 100% सुरक्षित र विवेकी.
√ पैसा पठाउने
√ भुक्तानीको लागि सिधै कार्टमा थप्नुहोस्
√ भुक्तान गरिसकेपछि, तपाईंले अर्डर पुष्टिकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यो सेक्स डल किन्नुहोस्, तपाईले पाउनुहुनेछ:
≥2जोडी आँखा, तस्वीर देखाउँछ
≥ 1 विग, चित्रले देखाएको रूपमा
≥ छाला टोन, तस्विरले देखाउँछ
≥ Areola रंग, तस्वीर देखाउँछ जस्तै
≥ Labia रंग, तस्वीर देखाउँछ जस्तै
≥ औँलाको नङको रंग, तस्विरले देखाएको जस्तो
≥ खुट्टाको नङको रङ, तस्विरले देखाएको जस्तो
एम्माको पृष्ठभूमि कथा:
के तपाईंलाई थाहा छ रातो-कपाल भएको केटीहरू सबैभन्दा रोमान्टिक र भावुक हुन्छन्? सुन्दर शरीर र यथार्थवादी अनुहारहरूको साथ यो पातलो र सुन्दर सौन्दर्य जाँच गर्नुहोस् - तपाईं बेडरूम छोड्न चाहनुहुन्न।
"सायद सबैको इच्छा फरक फरक हुन्छ, र मेरो मुटुको गहिराइमा म साँचो प्रेम पाउन उत्सुक हुन्छु। साथसाथै म सेक्सको लागि बढी उत्सुक छु। म हरेक दिन प्रेम गर्ने भावनाको कल्पना मात्र गर्न सक्छु। तर म यो कहिले पनि अनुभव गरेन। दोस्रो एकल जीवनबाट छुटकारा पाउन आशा गर्दछ। " एमाले भनिन् जब उनी हाम्रो कम्पनीमा आईन्।
जे होस् TPE कायम गर्न सजिलो छैन, यो सिलिकॉन भन्दा सस्तो छ र नरम बनावट छ जुन मानव छाला जस्तो लाग्छ। यी प्रकार्यहरूको संयोजनले यसलाई सस्तो र यथार्थपरक यौन पुतली बनाउनको लागि उत्तम सामग्रीहरू मध्ये एक बनाउँदछ।
तपाईं मुख, जननांग, गुद्द्वारको यो अंश प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ मौखिक सेक्स, सहशारा, गुदा र स्तनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनी तपाईंलाई चाहिएको कुनै पनि आसनमा पनि भेट्न सक्छिन्।
१००% गोपनीय यातायात - भित्र के छ कसैले थाहा पाउँदैन, हामी तपाईको गोपनीयता सुरक्षित गर्नमा धेरै केन्द्रित छौं। बाकससँग कुनै लेबल छैन।
कप ： B
तौल ,,70० एलबीएस (२,१32० किलो)
बस्ट ： २ in मा (.32.7 83.०XNUMX सेमी)
कम्मर मा 19.7 (50CM)
हिप्स ： मा 30.7 (78CM)
योनी ： २ in मा (.7.1 18.०XNUMX सेमी)
गुरू ： मा 6.3 (16CM)
मुख: मा 5.1 (13CM)
अमेलिया १४२ सीएम के कप ठूलो स्तन TPE WM एनिमे सेक्स गुड़िया
अमेलिया पृष्ठभूमि कथा: मेरो एक प्रेमिका छ जो कपाल स्टाइलिस्टको रूपमा काम गर्दछ, र म सामान्यतया कामबाट बाहिर पछि उसलाई भेट्छु। एक दिन, उनको मालिक टाढा थियो र कुनै ग्राहक थिएनन्। उनका साथीहरू अझै पसलको अगाडि आराम गर्दै छन्। म मेरो केटीको साथ छु र उनलाई मेरो मुर्ख पालन गर्न भन अचानक, ...
सोफिया WM 172CM लाइट टैन स्किन बी कप रियलिस्टिक वयस्क TPE प्रेम गर्नुहोस् ...
सोफिया पृष्ठभूमि कथा: म रेस्टुरेन्ट प्रबन्धक हुँ। म आइतबार साँझ :7::30० को आसपास काममा जान्छु र म धेरै व्यस्त छु। जब रेष्टुरेन्ट म्यानेजर अफिसमा पसे, म अफिसमा थिएँ, ढोका बन्द गरें र उनले मलाई च्याट गर्नु पर्ने कुरा बताइदिए (हामीले भाग्नको लागि एक महिना लाग्यो)। जब उनले मलाई चुम्बन गर्न थाले ...
अवा - १142२ सीएम के कप कप डब्ल्यूएम गोरा स्लिम लाइट ट्यान स्किन टाईप सेक्स डोल ...
हाम्रो प्रतिबद्धता: ❤ सबै सेक्स डल्स उत्पादनहरू नि: शुल्क पठाइन्छन्। त्यहाँ कुनै लुकाइएको शुल्क छैन। Dol यौन पुत्रालाई भण्डारण र ढुवानीको लागि विशेष बक्स। अरूले यसलाई बाहिरीबाट गुँडको रूपमा चिन्न सक्दैनन - तपाईंको गोपनीयता सुरक्षित गर्दछ। ❤ हाम्रो वास्तविक पुतलीहरू सुरक्षित र गैर-बाट बनेका छन् ...
क्यारोलिन-उनलाई एक समानमा हेरिनुहोस् तपाईंको हार्स्टस्ट्रिंग सेक्स डोल
क्लो - १163 सीएम सी कप कप डब्ल्यूएम हेड लाइट छाला टीपीई सेक्स डल
एलेनोर पृष्ठभूमि कथा: उनले सोधे कि यदि मैले स्वाद पाउन सक्छु। ऊ बिस्तारै मेरो भिजेको बिरालोमा हिंडे र उसको जिब्रोले मेरो भग्नोलाई चाट्यो। यो पहिलो पटक बाहिर खाँदै छु। जब म ओर्गास्ममा पुगेँ, मैले आफ्नो अनुहारमा तकिया हाले र विलाप गरे। उहाँ म कहाँ फर्कनुभयो, मेरो कमीज खोलियो, र मेरो निप्पल्स चुस्नुभयो। ...
नोरा - १159 C सीएम डी कप कप WM हेड लाइट छाला TPE सेक्स डल
पेनेलोप पृष्ठभूमि कथा: मेरी प्रेमिका र म किराना स्टोरमा डिनरको लागि किनमेल गर्दैछौं। त्यस समयमा हामीसँग पूर्ण सेक्स थिएन, केवल हाम्रो कपडा फ्याँक्ने। एक पटक, म कन्डम प्रदर्शन मा घडी, र गल्लीमा उभिए, र एक सानो सीy भएको। मेरी प्रेमिकाले एक नजर लिए र मलाई c मा हेरेको देखे ...
रिले १ CM० सीएम D-Cup WM लाइट ट्यान स्किन TPE सेक्स डॉल
रिले पृष्ठभूमि कथा: रिले 158 सेन्टिमिटरको उचाइको TPE सेक्स पुतली हो। म पहिले कहिल्यै केटी संग गएको छैन, र म अविश्वसनीय उत्साहित थिएँ। मैले पहिले जस्तै उसले मलाई छुन थाल्यो, र केहि मिनेट भित्र, म झन झन squirts। उनले फेरि टिस्यु प्रयोग गरिन् र सोधिन् कि म उसलाई छुन चाहन्छु। म कसरी...
अरोरा १162२ सीएम एफ कप कप WM ट्यान छाला TPE सेक्स गुड़िया
अरोड़ा पृष्ठभूमि कथा: अरोरा एक TPE यौन गुडिया हो जसको उचाई १ a२ सेमी छ। म मेरो प्रेमीको घरमा थिए र हामी मायाको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं। उसले भन्यो कि उसले मलाई माया गर्छ, र त्यो समय सही लाग्दछ। म यस बारे लामो समय को लागी सोचिरहेको छु। मैले तल्लो-कट स्पानडेक्स शर्ट र मिनी स्कर्ट लगाएको थिएँ, nothin ...
हन्ना १ 164 सीएम डी कप कप WM हल्का छाला TPE सेक्स डल
हन्ना पृष्ठभूमि कथा: हन्ना १ T164 सेन्टिमिटर उचाईको एक TPE लि dol्ग गुडिया हो। म चाहन्छु कि उसले मलाई असाध्यै नराम्रो व्यवहार गर्न सकोस्। ऊ कारबाट बाहिर आउँदैछ। म मूलत: उहाँलाई यो मलाई दिन बिन्ती गर्दै थिए। अन्त्यमा, उसले मलाई खाना खान बन्द गर्यो र उसको डिक भर्यो। मैले क्र्याक महसुस गरें, तर मैले उसलाई रोकेन। हामीbमा वरिपरि गडबड ...